Guryo arday la’aan ba’an ayaa Iswiidhen ka taagan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guryo arday la’aan ba’an ayaa Iswiidhen ka taagan
La daabacay torsdag 27 juni 2013 kl 13.54
Marka la barbardhigo dalalka waqooyiga Yurub, Iswiidhen ayaa ugu liidata xagga diyaarinta guryo ardaydu galaan. Safafka guryahaas loogu jiraana aad ayey u dheer yihiin. Rajada in mustaqbalka la dhiso guryo arday aad ayey u xun tahay marka la barbardhigo waddamada deriska ah. Sidaas waxaa sheegtay shirkadda Stiftelsen Stockholms studentbostäder oo is barbardhigaan sameeyey.
Stockholm wuxuu safku qaataa ugu yaraan labo sano, halka ay magaalooyinka Uppsala, Lund, Göteborg iyo magaalooyin kale oo badan iyagana qaadato waqti aad u dheer si loo helo guryo arday. Taasina waa waqti ka dheer inta ku qaadato ardayda ku nool waddamada deriska ah.
Taas micneheedu waxa weeye in Stockholm gaar ahaan iyo Iswiidhen guud ahaan ay ku liitaan xagga tartanka, taasina ay tahay wax laga xumaado. Sidaasna waxaa sheegay Chris Österlund, oo maareeye guud ka ah shirkadda Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB.